Ahoana ny fandroahana ny hafatra momba ny spam mifanaraka tsara - Torohevitra avy amin'ny Expert Expert
Nilaza i Ivan Konovalov, manam-pahaizana Semalt , fa heverina ho iray amin'ireo algorithm fampiasana spam-tsara indrindra hatramin'izay ny sivana Spam Gmail. Manampy amin'ny fampiasana hafatra tsy misy dikany sy hafatra tsy misy dikany ao amin'ny mailakao. Gmail no mpilatsaka an-tsitrapo maimaim-poana sy tsara indrindra amin'ny mpampiasa maro eran-tany. Amin'ny ankapobeny, olona roa arivo tapitrisa no mampiasa ny Gmail ho toy ny ID voalohany. Natomboka tamin'ny 2004, Gmail dia nanatsara ny tenany tamin'ny fotoana ary nanomboka nanolotra sivana lehibe ho antsika hanesorana ny mailaka mailaka. Ny iray amin'ireo endriny izay manintona ny mpampiasa dia ny tena sangisangy ara-spam. Tahaka an'i Rediff, MSN, ary Yahoo, Gmail dia nahatonga antsika ho mora ny hisoroka ny hafatra momba ny spam ary hanova azy ireo amin'ny ordinateran'ny Spam ao amin'ny Trash Can.
Inona no atao hoe Spam Filter?
Ny fitadiavana spam Gmail dia lasa tsara kokoa sy mora tamin'ny taona..Koa satria mahatonga antsika ho mora amin'ny fisorohana hafatra amin'ny spam izany, dia tsy maintsy hanamarina ny fahaiza-manaony sy ny endriny alohan'ny hanapahana hevitra raha tsara ho an'ny mailaky ny orinasa na tsia. Ho an'ny fanombohana, ny filtration dia ny dingana izay manala ireo zavatra tsy ilaina sy mahatsikaiky, mamela any ambadiky ny zavatra ilaina sy tsara. Toy izany koa, ny sariohatry Gmail Spam dia mamoaka ny hafatra sy mailaka madinidinika izay misy rohy na rakitra mampiahiahy.
Ny maha-tokana azy dia ny fomba itondrany ny mailaka sy ny hafatrao. Matetika ny mpampiasa dia tsy mila manala ny mailaka mampiahiahy amin'ny fomba maro toy ny sivana spam an'ny Gmail dia manao izany fa tsy ny anao. Na izany aza, raha mihevitra ianao fa mampiahiahy ny mailaka na mpandefa iray, azonao atao ny mamorona ny sivana ao amin'ny kaonty Gmail ary ampidiro io sila-mailaka io amin'ny sivana mba hisorohana mailaka na hafatra ho avy.
Ny Blatant Blocker dia mamela ny mpampiasa mamafa spam amin'ny fomba manalehibe azy, mampitombo ny taham-pitenenan'ny tranonkala. Manakana ny mpitsikilo tsy mandefa hafatra tsy misy ilana azy koa izany.
Ny Tahirim-bolan'ny Bulk dia miasa rehefa mahazo mailaka maromaro avy amin'ilay mpandefa. Izy io dia mametraka ny fototry ny herisetra sy ny sivana amin'ny sivana tsy tapaka.
Ny sokajy Gmail an'ny Filma dia manampy amin'ny fanivanana ny hafatra manokana momba ny spam izay ahitana votoaty manokana toy ny mailaka, sary, firaisana ara-nofo ary fanasana amin'ny toerana filokana.
Ny fanamafisana ny solo-tena Izy dia mamafa ny adiresy IP avy amin'ireo senda izay efa nandefa hafatra tsy misy ilana azy isan'andro.
Rahoviana no mihatra ny solosaina Gmail?
Soa ihany, ny jiro spam Gmail dia mandinika tsy tapaka ny hafatrao any amin'ny tany misy anao. Ohatra, ny sivana Spam Category dia ampiharina rehefa manonofinofy anao isan'andro ny famandrihana vaovao amin'ny gazetiboky. Azonao atao anefa ny mifidy izay tokony mandefa hafatra ary tsy tokony. Raha toa ka tsy manitsy na inona na inona ianao, ny solosaina spam Gmail dia tsy mitsahatra miasa amin'ny azy manokana, manome anao ny traikefa tsara indrindra amin'ny mailaka Source .